FEELM = Authentic hahatsapa + Metallic FilM
Ny FEELM dia maniry fatratra ny fanatsarana ny traikefa momba ny fifohana sigara ho an'ny olon-dehibe mpifoka miaraka amin'ny haitao sy fitaovana vaovao. Ny fampifangaroana horonantsary metaly miaraka amina mpitaingina keramika, ity haitao revolisionera ity dia zava-bita iray tamin'ny fitaovana nentim-paharazana sy ny siansa struktural, misolo tena ny sisintany vaovao amin'ny indostrian'ny atomika misavoana.
Ny FEELM dia mifanentana tanteraka amin'ny Teknolojia Film Vaping ao amin'ny Closed Pod System, mitondra tsiro be sy traikefa vaping miavaka amin'ireo mpankafy e-sigara, ary mahatsapa fifohana sigara ho an'ireo mpifoka olon-dehibe.
Ny haitao FEELM dia noforonina tamin'ny taona 2016 avy amin'ny SMOORE International Holdings Limited (Stock Code: 6969.HK), orinasam-pianakavian'i VAPORESSO, CCELL ary METEX.
• Niorina ny SMOORE
• Miara-miasa amin'i NJOY, KING natomboka
• Miara-miasa amin'i Altria, nanamboatra orinasa manokana MarkTen
• Ivotoerana R&D mitarika indostrialy napetraka, mifantoka amin'ny Teknolojia fanamainana keramika
• Namolavola ny 1st generasi Ceramic Coil T28
• Ivon-toerana SMOORE Changsha Research Institute
• Nandefa Coil Ceramic Film T29 metaly tamin'ny metaly
• Ivontoerana Fikarohana SMOORE Shenzhen
• Niara-niasa tamin'i RJ Reynolds, nandefa ny Vuse Alto
• Miara-miasa amin'ny BAT, nandefa Vype ePod
• Niara-niasa tamin'ny RELX, nandefa RELX Classical tany Shina
• Nanangana ny NJOY ACE
• Nanambara eran-tany ny marika Heating Technology FEELM, nahazo ny loka Golden Leaf Awards
• Ny volan'ny varotra FEELM ao anaty paiso dia nihoatra ny 100 Tapitrisa
• Navoaka tamin'ny mari-pahaizana "FEELM inside" Global Technology Authentication Trademark
• Niara-nanangana ny orinasa E-cig Exclusive lehibe indrindra eto an-tany miaraka amin'ny RELX
• Ny fahaizan'ny famokarana FEELM ao anaty paiso dia nihoatra ny vola 1 Miliara
• Ny Teknolojia fanamainana keramika dia nahazo ny mari-pankasitrahana voalohany indrindra momba ny patanty sinoa voalohany tao amin'ny orinasa
• Nandalo ny andrana fanombanana CNAS ny foibe fanadinana sy fanadinana SMOORE
• Ivon-toerana fikarohana SMOORE Tangshan Research Institute
• SMOORE voatanisa ao amin'ny HKEX (kaody stock: 6969.HK)
• Nahazo ny loka mari-pahaizana iF Design 2020
• Nampiasaina ho an'ny Patent Global 1600 mahery
Niorina tamin'ny 2006, SMOORE International Holdings Limited dia Orinasa teknolojia avo lenta ary mpitarika malaza manerantany amin'ny famolavolana vahaolana momba ny teknolojia atomika. Izy io dia manokana amin'ny teknolojia atomisation ary koa ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana ny conducteur ceramic.
SMOORE dia manome lanja lehibe ny R&D sy ny fanavaozana. Miaraka amin'ireo mpikambana fototra nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite ambony toa ny Georgia Institute of Technology, Purdue University, Tsinghua University, ary Chinese Academy of Science, SMOORE dia manana patanty mihoatra ny 1600 manerantany, mandrakotra saha maromaro toy ny conducteur ceramic sy atomizers elektronika.
Noho ny haitao fanapahana haitao farany avo lenta, ny vokatra SMOORE dia nahazo mari-pankasitrahana WM, RBA, EICC, BSCI, GMP, cGMP ary TUV ary aondrana any amin'ny firenena sy faritra 50 manerantany. Manohy manome vokatra sy serivisy avo lenta, SMOORE dia nanjary sehatra teknolojia lozisialy malaza manerantany, eken'ny besinimaro sy ankafizin'ny mpampiasa farany.
Noho ny haitao R&D mandroso, ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra entana matanjaka, ny portfolio-n'ny spectrum malalaka sy ny toby mpanjifa maro karazana, hoy i Frost & Sullivan, SMOORE no mpanamboatra fitaovana vaping lehibe indrindra manerantany amin'ny resaka fidiram-bola, mitaky ny 16,5% amin'ny ampaham-barotra rehetra, amin'ny 2019.
Sigara hafanana, E sigara etona ranoka, E Kitapo Blitter sigara, Solony mifoka, Epen, Newport E sigara,